रग्बी संघ गठन भएपछिको पहिलो कदम: धनगढी रंगसालामा खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण – Sodhpatra
सामाजिक सञ्जालमा के लेख्ने, के नलेख्ने ? जिम्मेवार व्यक्तिले समेत किन टिनएजर जस्तो व्यवहार गर्छ ?
दया फाउण्डेशनले कविता प्रतियोगिताको दोस्रो सत्र आयोजना गर्दै
नक्सा प्रकाशित भइसके पश्चात् बाडीने तक्मा आज सम्म किन न सच्याएको ? : डा.भीम रावल
रग्बी संघ गठन भएपछिको पहिलो कदम: धनगढी रंगसालामा खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण
प्रकाशित : २९ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:२९ March 13, 2021
धनगढी: धनगढीमा २ दिने रग्बी प्रशिक्षण शुरु भएको छ । सुदूरपश्चिमका बिभिन्न ठाउँबाट सहभागी खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको हो । रग्बी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना तथा रग्बी संघ कैलालीको आयोजनामा धनगढी रंगसालामा प्रशिक्षण शुरु भएको हो । प्रदेशमा रग्बी संघ गठन भएपछि यो पहिलो कार्यक्रम हो । प्रशिक्षणको उद्घाटन प्रदेश संयोजक जयन्द्र दाहालको हातमा बल दिएर कैलारी गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले गरेका हुन् ।
रग्बी खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष चौधरीले यो नयाँ र फरक किसिमको खेल सबै खेल प्रेमीले सिक्न जरुरी रहेको बताए । अन्य खेल जस्तै सहजै तरिकाले खेल्न सकिने रग्बी खेलप्रति आम खेलाडीको सहभागिता बढ्ने उनले बिश्वास ब्यक्त गरे । यसका लागी कैलारी गाउँपालिकाले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागी तयार रहेको समेत अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
कार्यक्रममा प्रशिक्षक बिनोद तामाङले खेलबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा रग्बी कोच चन्द्र रावल, प्रदेश खेलकुद कार्यालय प्रमुख प्रेम मल्ल, प्रशिक्षक ललित खत्री, लगायतको उपस्थिती थियो । साथै कार्यक्रमको सञ्चालन रग्बी संघ कैलालीका अध्यक्ष रमेश भट्राइले गरेका थिए ।
प्रेस युनियन कैलालीद्धारा महासंघका नव निर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत
धनगढीमा दलित सशक्तीकरण विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न !
‘सके दौडौं, नसके हिडौं’ भन्दै एकाबिहानै एकसाथ दौडियो धनगढी !
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाको अध्यक्षमा जोशी निर्वाचित !
आउने शनिबार यसकारण दौडिने छ धनगढी !